လက္ခဏသုတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
လက္ခဏသုတ် သည် ထေရဝါဒပိဋကတ်မှ ဒီဃနိကာယ်လာ ပါထိကဝဂ္ဂပါဠိမှ သတ္တမမြောက် သုတ္တံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလက္ခဏသုတ်တွင် သုံး ဆယ့်နှစ်ပါးသော မဟာပုရိသလက္ခဏာအကြောင်းကို စုံလင်စွာ ရှင်းလင်းပြထားသည်။ မဟာပုရိဿလက္ခဏာများကို ပိုင်ဆိုင်သူသည် စကြာဝတေးမင်းဖြစ်နိုင်သည် (သို့) ဗုဒ္ဓဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသုတ်သည် ရှေးယခင်ဘဝက ပြုခဲ့သော ကောင်းမှုကုသိုလ်များကြောင့်သာလျှင် ရရှိခြင်းဖြစ်၍ ပစ္ဆေကဘဝတွင်လည်း ထိုကုသိုလ်တရားများဖြင့်သာ ရရှိတည်တန့်နိုင်ကြောင်း တိတိကျကျ ဖွင့်ဆိုပြထားသည်။
ဗုဒ္ဓေါ၊ မြတ်စ္စာဘုရားသည်။ နိဂြောဓဗိမ္ဗော၊ အရပ်နှင့် အလံမျှသဖြင့် ပညောင်ပင်၏ အဝန်းကဲ့သို့ ဝန်းသော ကိုယ်တော်လည်းရှိတော်မူ၏။ မုဒုကရ စရဏော၊ အကြိမ်တစ်ရာ ဖတ်အပ်သော ငါဂွမ်းကဲ့သို့ နူးညံ့သော လက်ဖဝါး ခြေဖဝါးတော်လည်း ရှိတော်မူ၏။ ဗြဟ္မီဃောသော၊ ဗြဟ္မာမင်း၏ အသံထက် ကဲလွန်စွာ သာယာသော အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော အသံလည်း ရှိတော်မူ၏။ ဧဏိဇင်္ဃော၊ ဧဏီမည်သော သား၏ မြင်းခေါင်းကဲ့ကို ပြည့်ဖြိုးသော မြင်းခေါင်းတော်လည်း ရှိသော်မူ၏။ ကောသစ္ဆာဒင်္ဂဇာတော၊ရွှေပဒုမ္မာကြာချပ်နှင့်တူသော အအိမ်ဖြင့် ဖုံးလွှမ်းအပ်သည်ဖြစ်၍ ကျစ်လစ်လှစွာသော ယောက်ျားမြတ်၏ နိမိတ်တော်လည်း ရှိတော်မူ၏။ ပုနရပိ တစ်ဖန်လည်း။ သုဂတော မြတ်စွာဘုရားသည်။ သုပ္ပတိဋ္ဌိတပါဒေါ၊ ရွှေခြေနင်း အပြင်ကဲ့သို့ ညီညွတ်စွာတည်သော ခြေဖဝါးတော်လည်း ရှိတော်မူ၏။ မုဒေါဒါတုဏ္ဏလောမော၊မျက်မှောင်နှစ်ခုတို၏အလယ်၌ နူးညံ့ဖြူစင်သော ဥဏ္ဏလုံမွေးရှင်တော်လည်းရှိတော်မူ၏။ အထမပိ ထိုမှတပါးလည်း။ သုဂတော၊ ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ ကြွသွား တော် မူတတ်သော မြတ်စွာဘုရားသည်။ ဗြဟ္မုဇုဂ္ဂတ္တဘာဝေါ၊ ဗြဟ္မာမင်း၏ ကိုယ်ကဲ့သို့ ဖြောင့်မတ်သော ကိုယ်တော်လည်း ရှိတော်မူ၏ ။ နီလက္ခီ၊ ညိုသော မျက်လုံး တော်လည်းရှိတော်မူ၏။ ဒီဃပဏှီ၊ ရှည်သော ဖနောင့်တော် လည်း ရှိတော်မူ၏။ သုခုမ မလဆဝီ၊ သိမ်မွေ့လှစွာသော အညစ်အကြေးမတင် သန့်ရှင်း စင်ကြယ်သော အရေတော် လည်း ရှိတော်မူ၏။ ထောမျရသဂ္ဂသဂ္ဂီ၊ အနည်းငယ်သော အရသာကိုသော်လည်း ဆောင်ယူခြင်းငှါ စွမ်းနိုင်သော ခုနစ်ထောင်သော ချီးမွမ်းအပ်မြတ်သော အကြောတော်တို့၏ အဖျားလည်း စုဝေးလျက် ရှိတော်မူ၏။
သောဇိနော၊ ထိုမြတ်စွာဘုရားသည်။ စတ္တာလီသဂ္ဂဒန္တော၊ လေးဆယ်စေ့ထ မွန်မြတ်လှသော သွားတော်လည်း ရှိတော်မူ၏။ သမကလပနဇော၊ လွှနှင့်ဖြတ်သကဲ့သို့ ညီညွတ်စွာသော သွားတော်လည်း ရှိတော်မူ၏ ။ အန္တရံ သပ္ပပီဏော၊ ရေစီးကြောင်းမထင် ပြည့်ဖြိုးစင်သော ကျောက်တော်လည်း ရှိတော်မူ၏။ စက္ကနင်္ဂိတပါဒေါ၊ စက်ဖြင့် မှတ်အပ်သော မြတ်သော ခြေဘဝါးတော်လည်း ရှိတော်မူ၏။ အဝိရဋ္ဌ ဒသနော၊ မကျဲသော သွား တော် လည်း ရှိတော်မူ၏။ မာရဇိ၊ မာရ်ငါးပါးကို အောင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသည်။ ဥဿင်္ခပါဒေါ၊ မြူမတင်လင့် မြင့်သော ဖမျက်တော်လည်းရှိတော်မူ၏။ တိဋ္ဌန္တော ရပ်တော်မူလျက်။ နောနမန္တော၊ မကိုင်းညွတ်ဘဲ။ ဥဘယကရမုဒုနာ၊ သိမ်မွေ့ နူးညံ့သော လက်တော်နှစ်ဘက်ဖြင့်။ ဇဏ္ဏုကာနိ၊ ပုဆစ်ဒူးတော် နှစ်ဘက်တိုကို အာမသန္တော၊ သုံးသပ်တော်မူနိုင်၏။ ဝဋကဏ္ဌော၊ ရွှေမုရိုးစည်ငယ် သဏ္ဌာန်ကဲ့သို့ လုံးသောလည်တော်လည်း ရှိတော် မူ၏။ ဂေါတရုဏပခုမကော၊ ထို ခဏဖွားသော နွားငယ်၏ မျက်မွေးနှင့် အတူ သိမ်မွေ့နုပျို ညိုသောမျက်မွေးတော်လည်း ရှိတော်မူ၏။ သီဟပုဗ္ဗဍ္ဎကာယော၊ ခြင်္သေ့မင်း၏ ရှေ့ထက်ဝက်သော ကိုယ်နှင့်အတူ ပြည့်ဖြိုးသော ကိုယ်တော်လည်း ရှိတော်မူ၏။
သုဂတော ကောင်းသောစကား ဆိုတော်မူတတ်သော မြတ်စွာဘုရားသည်။ သတ္တပ္ပီဏောစ၊ ခုနစ်ပါးသော အရပ်တို့၌ ပြည့်သော အသားတော်လည်း ရှိတော်မူ၏။ ဒီဃင်္ဂုလိ၊ ရှည်သော် လက်ချောင်း ခြေချောင်းတော်လည်း ရှိတော်မူ၏။ အထ၊ ထိုမှတပါး။ လောမကူပေကလောမော၊ တစ်ခုခုသော မွေးတွင်းတော်၌ တစ်ချောင်း ချောင်းသာရောက်သော မွေးညှင်းတော်လည်း ရှိတော်မူ၏။ သမ္ပန္နောဒါတဒါဌော၊ ပြည့်ဖြိုး ဖြူစင်စွာသော ကိုယ်တော်လည်း ရှိတော်မူ၏။ ကနကသမတစော၊ ဇမ္ဗူရာဇ် ရွှေစင် ကဲ့သို့သော အရေတော်လည်း ရှိတော်မူ၏။ နီလမုဂ္ဂလောမော၊ မျက်နှာတော်ကို မျှော်ဘိသကဲ့သို့ အထက်သို့တက်သော လက်ျာရစ်လည်၍တည်သော အလွန် ညိုသော မွေးညှင်းတော်လည်း ရှိတော်မူ၏။ သမ္ဗုဒ္ဓေါ မြတ်စွာဘုရားသည်။ ထူလဇိဝှေါ ကြီးပြန့်သော လျှာတော် လည်း ရှိတော်မူ၏။ အထ၊ ထိုမှတပါး။ သီဟဟနုကော၊ခြင်္သေ့မင်း၏မေးနှင့်တူသော ပြည့်ဖြိုးသော မေးတော်လည်း ရှိတော်မူ၏။ ဇာလိကပ္ပါဒဟတ္ထောစ၊ လေသွန်တံခါး၌ လက်သမား တတ်စီထားအပ်သော ရွှေပွတ်တိုင်ကဲ့သို့ တင့်တယ်စွာရှည်သော ခြေချောင်း လက်ချောင်းတော်လည်း ရှိတော်မူ၏။ နာထော မြတ်စွာဘုရားသည်။ ဥဏှီသသီသော၊ နဖူးသင်းကျစ် ချယ်လယ်သဖြင့် တင့်တယ်သော ဦးခေါင်းတော်လည်းရှိတော်မူ၏။ဣတိဂုဏ သဟိတံ၊ ဤဆိုအပ်ခဲ့ပြီးသော ကျေးဇူးအပေါင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံမူသော။ တံ မဟေသိံ ထိုမြတ်စွာဘုရားကို။ အဟံ အကျွန်ုပ်သည်။ နမာမိ၊ ရှိခိုးပါ၏။
↑ "Lakkhana Sutta", (The thirtieth sutta of the Dīgha Nikāya. It gives an account of the thirty two special marks of the superman (mahāpurisalakkhanāni) which signify that their possessor will be eitheraworld emperor (Cakkavatti) oraBuddha.)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လက္ခဏသုတ်&oldid=641949" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။